Izikhwama Zokulungisa Izicucu Izikhwama Zesikhumba Zivela Ku-Shoemaker - Palermo
Kuvaliwe: NgoMgqibelo ntambama e ngeSonto
Izikhwama Zokulungisa Izicathulo "Dal Calzolaio"
Iminyaka engaphezu kwengu-25 Ukugqama Kokulungiswa Kwezicathulo, Izingubo Zesikhumba, Izikhwama kanye Namasheya.
4.7 /5 amavoti (amavoti angama-24)
Ukulungiswa kwezicathulo, izambatho zesikhumba, izikhwama namaseshi ngumkhakha omkhulu kuwo odlula kuwo Palermo "Dal Calzolaio". Isitolo futhi Isikhumba nezikhumba zezinkampani Izikhumba nezikhumba zesikhumba futhi ibona okudalwa okuningi, futhi esicelweni.
Ukulungiswa kwezicathu nezimpahla zesikhumba "i-Dal Calzolaio" ePalermo - Kwenziwe ukukala izicathulo
Kusuka ku-Shoemaker, a Palermo, yinkampani ekhethekile Ukulungisa delle tue I-Calzature ngesikhathi sokurekhoda: Ngomusa, ubuhlakani, ukunemba nokuzinikela kumakhasimende ukuhlukanisa le Master Shoemaker. Ngaphezu kwalokho, Kusuka ku-Shoemaker, a Palermo, yinkampani eyamukelwa ngobungcweti bayo ekufezekisweni kwemikhiqizo yesikhumba nokufihla, futhi uma iceliwe. Iyalungisa futhi Selle, lenza izimbadada ezifekethisiwe futhi ibhekana ngqo nokwakha izicathulo zanoma yiluphi uhlobo, kubandakanya nezamathambo. Kuyathengisa imikhiqizo yokuhlanza njengokuthi: okokugcoba, izintambo, okususa amabala, okungangenisi amanzi, okokupholisha kanye nemifino yemifino.
"Dal Calzolaio" Ukulungiswa kwezicathulo ePalermo - Izinto zesikhumba, izikhwama namaseshi njeng amasha
Ukulungiswa kwezicathulo, izikhwama nezimpahla zesikhumba ngokuqinisekile kungumsebenzi wokunakekelwa kwesitolo, okwazi ukukunikeza izicathulo zakho njengokusha. Ngokusebenzisa imishini yesimanje nezinto ezisezingeni eliphakeme, ezinjengezinyawo I-Vibram ekuxazululeni izihlangu, Kusuka ku-Shoemaker kwenza Ukulungiswa hhayi nje I-Calzature, kodwa futhi kuqhubeke Izingubo zesikhumba, izikhwama, izikhwama namasudi. "Kusuka ku-Shoemaker ", a Palermo, ifaneleke kakhulu ku- Ukulungiswa Kwamabhulashi Wezempi, Amatshe Bikers and Trekking boot, kanye nama-Riding boot. Futhi maqondana nokugibela amahhashi, Kusuka ku-Shoemaker a Palermo kwenza Ukulungiswa futhi kumaHalters, kubakaki nakwezinye izinto zehhashi. Futhi, kuma-Centaurs, Kusuka ku-Shoemaker ngokukhethekile ku Ukulungiswa Kwezikhwama nezinye Izithuthuthu. Umdwebi omkhulu wenza isikhumba esiyi-bespoke futhi afihle indalo. Uyathengisa Amabhola kufinyelela ku-XXXL, izikhwama, izikhwama, izikhwama, izikhwama zebhande kanye nezesekeli zesikhumba e lesikhumba.
Ukulungiswa kwezicucu zezinyawo kusuka ku-Shoemaker ePalermo - Ubuciko
Kusuka ku-Shoemaker, a Palermo, kunjalo Ukulungiswa kwe Izicathu, Izingubo zesikhumba, Izikhwama kanye namasudi e Inkampani Artisan wezikhumba zesikhumba nezikhumba. Kusuka ku-Shoemaker Kwenziwa izesekeli eziningi ezincane zesikhumba uku-oda: noma ngabe yini isifiso sakho, abashushi bendawo bazoyenza. Ngaphezu kwalokho, i-firm iyakha Amabhola ngesikhumba kanye nezinye isikhumba esenziwe ngokwezifiso Osayizi Abakhulu. Ngenxa yomdlandla omkhulu nokuzibophezela kwansuku zonke okutsaliwe kulobu buciko basendulo, Kusuka ku-Shoemaker a Palermo iyakwazi ukunikela ngezesekeli nezinyawo zezikhumba kuLeather, Isikhumba neSuede ngokusebenza kahle okuhle nobuciko obungenakuqhathaniswa okwandisa inani layo nobuqiniso. SI -eo iyatholakala futhi ukuthi ithengiswe imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu yenzelwe ngqo ukunakekelwa kwezinyawo nezicathulo, njengama-insoles, ama-insoles nemikhiqizo yokuhlanza izicathulo.
UDal Calzolaio - Ukulungiswa kweHogan Footwear
Kusuka ku-Shoemaker, a Palermo, è Izesekeli nezicathulo ezinyaweni zesikhumba, isikhumba nesikhumba ngokuqinile Kwenziwe e-Italy futhi kwenziwa ngobungcweti. Kuqiniswe isipiliyoni nekhono elitholwe eminyakeni engaphezu kwengu-25 yokuba khona kulo mkhakha, Kusuka ku-Shoemaker kuyisiqinisekiso seKhwalithi, Insizakalo nesivinini ku Ukulungiswa kwezicathulo, izambatho zesikhumba, izikhwama namaseshi. Kusuka ku-Shoemaker, a Palermo ihlanganisa amasu akudala wobuciko ngobuchwepheshe obuthuthuke kakhulu nobunqenqemeni ukuthola lokho Izikhumba Ezihlotshisiwe Izikhumba Nezikhumba Izikhumba. Futhi uzothola i-assortment enkulu yama-insoles kanye nama-insoles eMemory, isikhumba, i-latex, ijeli kanye nama-insoles wezingubo zezinyawo zikaHogan, okubuye kwenziwe kulungiswa kuwo, kanye nakuLumberjack, isikebhe nezicathu zokuhamba ngezinyawo, ama-sneaker, amabhuzu okuzingela nokunye okuningi. Ukutholakala okubanzi kwemikhiqizo emikhulu efana neVibram, Svig nePirelli okubuye kube wukuqinisekisa kwezinga eliphakeme lenkampani.
Ikheli: UVia Ammiraglio Rizzo, 88
I-POSTAL CODE: 90142
Ucingo: 329 3236238
Inombolo ye-VAT: 06104730822